हामीले अचम्म मा वर्ष शुरू गर्यौं। पेट्रो ओब्रियन द्वारा Aubrey र Maturin श्रृंखला वर्तमान साहित्य
हामीले अचम्म मा वर्ष शुरू गर्यौं। पेट्रिक O'Brian द्वारा Aubrey र Maturin श्रृंखला
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | नोभेला
फ्रिगेट सरप्राइज (पुस्तकबाट फोटो) मास्टर र कमाण्डर बनाउने - विश्व को टाढाटम म्याकग्रीगर द्वारा। बेलायती लेखक पैट्रिक ओ ब्रायन (१ 1914 १-2000-२०००)
नयाँ वर्षको साँझ हामी मध्येका लागि असम्भव थियो जो कन्फेटी र सेक्विनबाट बनेका छैनन्, त्यसैले मैले राम्रो सिनेमाको लागि रोजें। छनौट, एक असफल हुँदैन: मास्टर र कमाण्डर। संसारको सब भन्दा टाढा तटपिटर वीयर द्वारा (२०० 2003) एक उत्तम साहित्यिक श्रृंखलाबाट पूर्ण नौसेना साहसिक.
जे भए पनि, मैले हालसालै रिलिज गरिएको २०१ for को लागि अर्को रिजोलुसन गरें: यस उत्कृष्ट श्रृंखलाबाट मेरो मनपर्ने शीर्षकहरू पुनः पढ्न। द्वारा लिखित पैट्रिक ओ ब्रायन चालीस वर्ष पछि उनको पहिलो उपन्यास, एडभेन्चर अफ कप्तान ज्याक औब्रे र स्पेनिश-आयरिश डाक्टर र जासूस स्टीफन माचुरिन छोरा अपरिहार्य विधा को हरेक राम्रो प्रेमी को लागी। यो उनीहरूसँग मेरो प्रेम कहानी थियो।
मलाई पुस्तकहरू हेरिरहेको र बसेको याद छ कभरहरूमा राम्रा चित्रहरू हेर्दै। उनि पहिले नै मलाई समान ध्वनी मलाई थाहा भयो कि पिटर वीर चलचित्रहरूमा जान्छन् ती कभरहरू। सुरु गर्न मसँग समय थिएन पढ्न, स ad्कलन र नौसेना साहसिक एक गाथा मा अचम्मका र बेड गर्न असम्भव। त्यसैले हो, म स्वीकार्छु र मलाई कुनै परवाह छैन: त्यो समाचारको लागि धन्यवाद जुन मैले तिनीहरूलाई पत्ता लगाएँ।
तर पनि यो विधा - दुवै साहित्यिक र सिनेमाटोग्राफिक मलाई याद छ किनकि यो मलाई मोहित छ। र, मसँग छ अवसर (र भाग्य) जहाजमा जान र समुद्रमा जीवन कस्तो हुन सक्छ जान्नुहोस्।
अपेक्षाहरू अपराजेय थिए। न Nहरू रोमाञ्चक साहसिक कार्य एक संग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बाट फ्याँकिएको नेपोलियन साम्राज्यको अन्त्यसम्म फ्रान्सेली क्रान्ति। संयुक्त राष्ट्र जटिल भाषा को पाठकहरु को लागी समुद्री स्ल .्ग सामान्यतया तर tan आकर्षक को रूप मा आकर्षक र सुन्न को लागी आकर्षक। र ती अविस्मरणीय पात्रहरू.
Wiki को बारे मा ज्याक औब्रे र स्टीफन माचुरिननायकहरू, वा बाँकी सबै पात्रहरू जुन उनीहरूसँग थिए, प्राय सबै लेखिएको छ। तर यसको निर्माण को सार्वभौमिक मान्यता योग्य सुविधाहरुलाई पन्छाउँदै धारणा तिनीहरूलाई के हुन सक्छ पाठक आफैं भन्दा फरक छ। मात्र तिनीहरूले आफ्नो अनुहार मासु र रगतमा परिणत गर्नुपर्‍यो.
यो सिनेमाको जादू हो, छविहरूको ध्यान बिना हरेक पाठकले राख्न सक्छ। त्यो जादु राम्रोमा अझ राम्रो वा बढी सफल हुन सक्दैन उत्कृष्ट फिल्म अनुकूलन अस्ट्रेलियाका निर्देशक पिटर वीयर द्वारा बनाइएको संसारको सब भन्दा टाढा तट.
ती बाहेक परिवर्तनहरू के मा थिए लिपि - मूल उत्तर अमेरिकी जहाज पुस्तक बाट भयो Frances किनभने यान्कीज कसरी चलचित्रमा नराम्रो मान्छे हुने थिए—, परिणाम थियो शानदार। यद्यपि सायद एक शब्द मात्र पर्याप्त छ: सौन्दर्य प्रकाश, रंग, कल्पनाको प्रत्येक दृश्यको संगीत र पर्दामा पुन: निर्धारण गर्नेहरू उस्तै उस्तै छन्। र जस्तो सुन्दर।
मेरो Aubrey-Maturin श्रृंखला संग्रह को हिस्सा।
कम शौकिया वा जो कोही आफैलाई यी मा लगाउन सक्षम देख्दैन २० कार्य प्याक उपन्यासहरू, षड्यन्त्र, जासूसी, शिपरेक्स, विदेशी सेटिंग्स, अनुपम नौसेना लडाईहरू तपाईं छविहरूमा सिधा जान सक्नुहुन्छ। तपाईं पक्कै तिनीहरूलाई पढ्न चाहानुहुन्छ। र यदि तपाईं यस साहित्यिक विधाको प्रेमी हुनुहुन्छ भने, यो श्रृंखला हो बाध्य र रुचाइएको शेल्फमा सबै भन्दा राम्रो स्थानको योग्य।
अभिनेताहरूले साहित्यिक पात्रहरूलाई सटीक इशारा र आत्मा दिए। मैले ती मध्ये कुनै पनि देखिन। तिनीहरू बस थिए श्री एलन (नौकाविवाह), कुशल र साहसी कप्तान पुलिंग्स, अप्रभावी र मनमोहक किलिक, अनुभवी र अन्धविश्वासी नाविक जो प्लेट, राजी श्री मोवेट... र पक्कै दुई मुख्य चरित्र, एउटा हो अधिक कन्ट्रास्ट, उत्तम अवसरहरू र असाधारणको साहित्यिक जोडीहरू।
एकातिर, मेरो प्रशंसनीय र जटिल डाक्टर माचुरिन, आधा क्याटलन आधा आयरिश जासूस साथ साथै एक उत्कृष्ट डाक्टर र संगीतकार। तर्कसंगत, सटीक, austere र एकै समयमा आरक्षित, आदर्शवादी र भावुक.
अर्कोमा, ज्याक। क्षमा, कप्तान ज्याक औब्रे भाग्यशाली। त्यसो भए Bonhomie को पूर्णofaविशेष हास्य र यसको गर्जन risa। उनीहरूको साथ जोश र ज्यादती रक्सी जस्तै, तपाईंको संग धूर्त समुद्री डाकू हेर्नुहोस् शिकार पछि, आफ्नो सम्मान, कर्तव्य र बलिदान को भावना, आदेश तर आदर। अनि त्यो संवेदनशीलता यति भित्री र निहित छ तर संगीत, उनको डु in्गाको लागि उसको प्रेममा स्पष्ट छ, त्यो अद्भुत फ्रिगेट आश्चर्य, र उसका मान्छेहरू।
पल बेट्टनी र रसल क्रो तिनीहरूमा हराए। उनीहरूलाई एउटा मात्र दिन सकिन्छ तर उनीहरूले साहित्यिक चरित्रको उचाई परिवर्तन गरे, उपन्यासहरूका पाठकहरूको लागि मात्र प्रशंसनीय। अन्यथा, सबै पूर्ण थिए।
न त न त अहिले म उद्देश्यपूर्ण हुन सक्छ र मलाई यो जस्तो पनि लाग्दैन। यो मेरो लागि हो सर्वश्रेष्ठ नौसेना साहसिक श्रृंखला सबै समय को। र म यो गौरवपूर्ण यात्रा दोहोर्याएर यो नयाँ वर्ष सुरू गर्न चाहन्छु। म सबैलाई आमन्त्रित गर्दछु कि उनीहरूको कुनै एक शीर्षक पनि सुरूवात गर्न।
Aubrey र Maturin श्रृंखला
समुद्र र युद्धको कप्तान
Ionia मा मिशन
संसारको सब भन्दा टाढा तट
चित्रको अर्को पक्ष
तेह्र सम्मानको सलाम
क्लारिसा ओक्स, स्टोवेवे जहाजमा
पोर्ट जस्तै अन्धकार समुद्र
ज्याक औब्रेको अन्तिम अधूरो यात्रा, स्पेनिशमा प्रकाशित छैन
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » हामीले अचम्म मा वर्ष शुरू गर्यौं। पेट्रिक O'Brian द्वारा Aubrey र Maturin श्रृंखला
नमस्ते शुभ दिउँसो, मैले यी पुस्तकहरूको ईतिहासको बारेमा रसल क्रो फिल्मको माध्यमबाट सिके। म प्राप्त गर्न चाहन्छु तर म मेक्सिकोबाट छु ... मैले तिनीहरूलाई कहाँबाट ल्याएँ?
नमस्ते एन्जेलिका। तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद। मैले यहाँ स्पेनमा पुस्तक श्रृंखलाहरू किनेको हो, धेरै समय अघि डिपार्टमेन्ट स्टोरमा। म कल्पना गर्छु कि तपाईं तिनीहरूलाई मेक्सिकोमा पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। जे भए पनि तपाईसँग अमेजनमा छ।
पढ्ने मानिससँग प्रेममा झर्नुहोस्